Mitohy Ny Tolon’ny Mpamboly Fingotra Thailandey Na Dia Eo Aza Ny Vatsy Avy Amin’ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Mitohy Ny Tolon'ny Mpamboly Fingotra Thailandey Na Dia Eo Aza Ny Vatsy Avy Amin'ny Governemanta
Voadika ny 19 Septambra 2013 22:43 GMT
Fambolena fingotra ao Thailandy. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr Hanumann (CC BY 2.0)
Nanatontosa andianà fihetsiketsehana ireo mpamboly fingotra maherin'ny 10.000 ao atsinanan'i Thailandy nanomboka tamin'ny volana Aogositra mba hitaky fanampiana amin'ny governemana taorian'ny fihenàn'ny vidin'ny fingotra eo amin'ny tsena iraisampirenena. Vitan'ireo mpamboly mpanao fihetsiketsehana mihitsy ny nametraka sakan-dalana teny amin'ny arabe sy ny lalamby tamin'ny fiandohan'ity volana ity ka nisy fiantraikany teo amin'ny fizahan-tany sy ny fivezivezena ao amin'ny faritra maromaro ao atsimon'ny firenena izany
Thailandy no mpamokatra sy mpanondrana fingotra voajanahary betsaka indrindra manerantany.
Mitaky ny hanomezan'ny governemanta fanohanana tahaka ny fanohanana nomeny ireo mpamboly vary ireto mpamboly fingotra ireto. Na ny marimarina kokoa, mitaky ny governemanta izy ireo mba hanome fanampiana amin'ny alalan'ny vidiny.
Ity lahatsary AFP ity dia mampiseho ny sakan-dalana napetrak'ireo mpamboly fingotra:
Bangkok Pundit nanadihady ny vidim-bary sy ny vidin'ny fingotra ary koa ny vola miditra amin'ireo mpamboly ao Thailandy. Nanipika izy fa mbola mahazo betsaka noho ny mpamboly vary ny mpamboly fingotra:
…tamin'ny alalan'ny fanadihadiana manontolo ny haisoratra, mazava tsara fa kely ny vola miditra amin'ny mpamboly vary noho ny an'ireo mpamboly fingotra mandritra ny fotoana maharitra. Manoloana ny fidinan'ny vidin'ny fingotra, misedra olana vitsivitsy ireo mpamboly fingotra, saingy ara-tantara, nahazo tombony izy ireo.
Nanazava ihany koa izy fa nisy fiantraikany avy amin'ny fihanaky ny fingotra sintetika ny vidin'ny fingotra voajanahary:
… Na inona na inona, tsy vokatra tonga lafatra mahasolo ny fingotra voajanahary ny fingotra sintetika ary tsy hanjavona tampoka ny fingotra voajanahary, fa afaka manolo ny asany ny fingotra sintetika fa ny vidin'ny solika no tena mametra ny vidin'ity fingotra ity dia tsy mora ny mandona ny tsenan'ny fingotra
Misy ny eritreritra fa fandresen-dahatra avy amin'ny herin'ny mpanohitra manana tany ahofa ao amin'ny faritra famokarana fingotra ao atsimon'i Thailandy no mahatonga ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpamboly fingotra. Gadra politika ao Thailandy nanoratra fa:
.. Ny Atsimo no faritra mampatanjaka ny Antoko Demokraty, mpanao politika fanta-daza sy mpanambola be i Suthep Thaugsuban ao Atsimo, ary toa lojikan-paika politika hanozongozonana sy hahaveri-hevitra ny governemanta voafidy ny fananana hetsi-bahoaka anjakan'ireo tanora jiolahimboto marobe.
Na tetikady avy amin'ny mpanohitra izany na tsia, nivadika ho hetsika goavana ireo fihetsiketsehana. thaiintelligentnews nahita fa:
… Nilaza ankehitriny ny mpanara-maso tsy mitanila indrindra fa misy hetsika mitsoka rivo-politika ao Yingluck, dia ny hetsiky ny mpamboly fingotra, eo am-pelatanany.
Milaza an'i Praiminisitra Yingluck Shinawatra i Yingluck. Mibaribary fa nahomby tamin'ny nitodihan'ny governemanta izay nanambara hanokana vola fanampiana andro vitsy lasa izay ny fihetsiketsehana . Nankatòavin'ny Filankevitry ny Minisitra vao haingana ny famatsiam-bola 21,2 miliara baht mba hampitombo ny vola fanampiana ho an'ireo mpamboly fingotra manomboka amin'ny Septambra 2013 hatramin'ny volana Martsa 2014. Talohan'izay, nandrisika ireo vondrona mpamboly fingotra ny governemanta mba hanangana koperativa ho azy ireo manokana; ary nampanantena hanitatra ny fampindramam-bola ho an'ireo indostria mpamokatra fingotra ihany koa izy mba hampitombo ny vokatr'izy ireo. Nandritra izany, nanolo-kevitra momba ny famokarana fimailo vita Thailandey ny manampahefana misahana ny fahasalamana mba hahazoana tombony faratampony amin'ny famatsiana fingotra tafahoatra ao amin'ny firenena.
Nampizarazara ireo vondrona mpamboly ny tetikasa fanampiana ara-bola nambaran'ny governemanta. Nisy ireo vondrona nankasitraka ny tetikasa fanohanana ary nisy kosa ireo hafa nitsipaka izany. Nisy ny fihetsiketsehana natao tamin'ity herinandro ity ary nandrahona mbola hanao filaharambe ny sasany tamin'ireo mpamboly.